သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): ဦးညိုမြ မြင်းပျောက်ခြင်း
နဲနဲရှည်သွား၏။ အချိန်မရှိသူများ မဖတ်ကြပါရန်)
"မကြိုက်တဲ့ အရာကို ကြိုက်မိရင် ကြိုက်တဲ့ အရာကို ကြိုက်တာထက် ပိုကြိုက်သွားတတ်တယ်"
ညနေ ဆည်းဆာချိန်လေး တစ်ခု၌ တုံးဖလားသူကြီး ကိုကိုမောင်သည် သူကိုယ်တိုင် သီအိုရီထုတ်ထားသည့် အထက်ပါ စာသားလေးကို ရေမန်းမှုတ်သလို အကြိမ်များစွာ ပါးစပ်က တတွတ်တွတ်ရွတ်ပြီး သူ၏ အိမ်ဝင်းအပြင်ရှိ မြက်ခင်းစပ်၌ လူးလာခေါက်တုန့် စင်္ကြန်လျှောက်နေလေ၏။
"ဗျို့ .. လုပ်ဂ်ဘိုးလ် ဟီဘစ်ဂ်.. ပါးစပ်က လှုပ်စိလှုပ်စိနဲ့ ဘာဂါထာတွေ မန်းမှုတ်နေတာလဲဗျ"
အသံကြားရာဘက်သို့ လှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါ ဘိလတ်ပြန် မောင်ပေါက်ကျော်တစ်ယောက် အိမ်ဝင်းထဲ ၀င်လာနေသည်ကို တွေ့ရလေ၏။ သီအိုရီကောင်းလေး ထုတ်နေခိုက်မို့ မောင်ပေါက်ကျော်အသံသည် သူကြီးအဖို့ ငှက်ဆိုးထိုးသံကဲ့သို့ ဖြစ်သွား၏။ ဒီကောင် အရေးကောင်းတုန်း ရောက်လာပြန်ပြီ ဟု စိတ်ထဲကနေ ကျိန်ဆဲမိနေ၏။
"ဟာ... လုပ်ဂ်ဘိုးလ် ဟီဘစ်ဂ် ကလဲ သိရဲ့သားနဲ့"
ဒီလိုဘဲ မောင်ပေါက်ကျော်တစ်ယောက် သူကြီးမင်းအိမ်ကို အလည်လာနေကျဖြစ်၏။ အလည်လာတာက ရိုးရိုး အလည်လာတာမဟုတ်။ ကော်ဖီသောက်ချင်လို့ တမင်သကာ လမ်းမကြုံ ကြုံအောင် ၀င်လာခြင်းပင်ဖြစ်၏။ သူပြောတဲ့ သိရဲ့သားနဲ့ ဆိုတဲ့ စကားရဲ့ အဓိပ္ပါယ်မှာ ကော်ဖီလာသောက်တာဟူ၍ ဆိုလိုခြင်းပင်ဖြစ်၏။ ဒါပေမဲ့ သူပြောတဲ့ လုပ်ဂ်ဘိုးဟီဘစ်ဂ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သူကြီးမင်း တစ်ယောက် နားမလည်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေ၏။ ဒီကောင် ဘာတွေ စကားထာ လာလုပ်တာပါလိမ့်ဟု စိတ်ထဲ တွေးနေမိနေ၏။
"ဘာကြီးတုန်း မင်းပြောတဲ့ လုပ်ဂ်ဘိုးလ် ဟီဘစ်ဂ် ဆိုတာကြီးက"
"သူကြီးမင်းကလဲ ပိန်းလိုက်တာ။ အဲဒါ ဘိုလို ပြောနေတာဗျ"
"ဟုတ်တယ်ဗျ။ သူကြီးမင်း မသိရင် မှတ်ထားလိုက်ဦး Log-bowl He-big လို့ စာလုံးပေါင်းတယ်"
"အင်း ဆိုစမ်းပါဦး။ ဘာအဓိပ္ပါယ်ကြီးလဲ"
"Log ဆိုတာ တုံး၊ Bowl ဆိုတာ ဖလား၊ He ဆိုတာ သူ၊ Big ဆိုတာ ကြီး။ အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ Log-bowl He-big ဆိုတာ တုံးဖလား သူကြီးပေါ့ ဗျာ။ ဝေးပါ့။ ရှင်းပြရတာ လက်ပေါက်ကပ်လိုက်တာနော်ာ်ာ်ာ်"
ပေါက်ကျော် တစ်ယောက် သူ့အကျင့်အတိုင်း နိုင်ကွက်တွေ့ရင် လူသူလေးပါးမရှောင် နှိပ်ကွပ်တတ်သည်ချည်းပင်။ အခုလဲ သူကြီးမင်းဆိုတဲ့ မျက်နှာကိုပင် မထောက်တော့ဘဲ အကွက်ဆိုက်လာတာနဲ့ တန်းပြီး နှိပ်ကွပ်လေ၏။ ထိုကဲ့သို့ အင်္ဂလိပ်စကားကို ကြားညှပ်ပြီး ပြောတတ်တဲ့အတွက် ရွာထဲက သူတွေ အများအပြား သူ့ကို ရှောင်နေလေကြ၏။ စကားပြောရင် တံတွေးစင်တယ် ဟု အကြောင်းပြကာ ပေါက်ကျော်ကို ပယ်ထားကြလေ၏။ ထို့ကြောင့်ပင် သူ့ကို လက်ခံ စကားပြောသည့် သူကြီးမင်းအိမ်သို့ မကြာခဏ ရောက်လာတတ်၏။ ဒီတစ်ခါတော့ သူကြီးမင်းလဲ ငြိမ်ခံ မနေတော့ပေ။ ကြားဖူးနားဝနဲ့ ပြန်ပက်လိုက်၏။
"ထွီ.. မင့် အင်္ဂလိပ်စာ ချေးပေနေတယ်ကွ။ ညံ့ချက်ကတော့။ ဒါများ ဘိလတ်က ပြန်လာတာတဲ့။ ပြောရရင် မင့် အင်္ဂလိပ်စာက ရွာအနောက်ပိုင်းက ပေတူးရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလောက်ကို မကောင်းဘူး။ မသကာ Good Evening, Your Majesty, Mister Ko Ko Mg, ဒါမှမဟုတ် Your Excellency, Mr Ko Ko Mg ဆို တော်သေး။ မင်းက ဘိလတ်ကသာ ပြန်လာတာပါ။ ထီးသုံးနန်းသုံး ဘိလတ်စကားလဲ ကောင်းကောင်း တတ်မြောက်ခဲ့ပုံ မပေါ်ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာ မကျေညက်သေးရင် ပေတူးဆီသွားပြီး သင်ယူလိုက်ဦး။ ဟိုတစ်နေ့ ရွာအနောက်ပိုင်းကို လမ်းလျှောက်သွားရင်း ပေတူး အင်္ဂလိပ်စာ ကျက်နေတာ ငါကြားခဲ့တယ်။ အသံထွက် ကောင်းသလားမမေးနဲ့။ ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်စာ မီးနင်းတွေကို လင်္ကာလေးနဲ့ ကျက်နေလိုက်တာများ တကယ်မှတ်သားလောက်တယ်"
"သူကြီးမင်းကလဲ ဒီက ဘိလတ်ပြန် ပေါက်ကျော်ကြီး တစ်ယောက်လုံး ရှေ့မှာ ထားပြီး ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ရွာနောက်ပိုင်းက ငါးနှစ်သား ပေတူးကို ချီးကျူးနေလိုက်တာ၊ သူက အခုမှ မူကြိုအဆင့်ဘဲ ရှိသေးတာဗျ။ မတော်သကာ မူလတန်း တက်နေတဲ့ အောင်တိုးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြောရင် တော်သေးတယ်။ အဟီး။ ဒါနဲ့ ဆိုစမ်းပါဦး။ သူက ဘယ်လို လင်္ကာလေးတွေ စီကုံးပြီး မီးနင်းတွေ ကျက်မှတ်နေတာလဲ"
"ဒီလိုကွ။ Cat ကို "ကြောင်"ဆိုပြီး ရိုးရိုးမကျက်ဘူး။ လင်္ကာလေးနဲ့ ဒီလို... စီအေတီ-ကက် ၊ အသံထွက်၊ အနက် ကြောင်ဟုမှတ်။ နောက်ပြီး (Rat) "ကြွက်"ကိုလဲ အာအေတီ-ရက်၊ အသံထွက်၊ အနက်ကြွက်ဟုမှတ် ဆိုပြီး ကျက်နေလိုက်တာများ မင့်ထက်အများကြီး သာတယ်ကွ။ နားလည်လား"
"ကဲပါ ထားပါတော့ သူကြီးမင်းရယ်။ ပေတူးဆီ သွားသင်ဆိုလဲ သွားသင်ပါ့မယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ သူကြီးမင်း အိမ်ပေါ်တက်ပြီး ကော်ဖီပွဲလေး ကျင်းပလိုက်ကြရင် မကောင်းဘူးလား"
"အေးပါ။ မင်း လာပြီဆိုကထဲက ငါ သဘောပေါက်ပြီးသားပါ။ စကားစမြည် ပြောဖို့ လာသလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ နောက်ဆုံးကျတော့ ကော်ဖီဘူတာကို ဆိုက်တာချည်းဘဲ။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား"
"ကဲ... အာ မနေနဲ့ ... လာ အိမ်ပေါ်တက်ပြီး ကော်ဖီသောက်ရင်း စကားပြောကြတာပေါ့"
"ရော့.... ပေါက်ကျော်.. ဒီမှာ စူပါကော်ဖီမစ်..မင့်ဖာသာ ဖျော်သောက်ပေတော့"
"အာ.. သူကြီးမင်းကလဲ အမြဲတမ်း စူပါတွေချည်းဘဲ။ နတ်ကော်ဖီလေး တိုက်ပါဦးဗျ"
"နတ်ကော်ဖီလေ။ ဟိုတစ်နေ့ကတောင် ကျနော် သောက်သွားသေးတယ်။ အနံ့လေးက မွှေးမွှေးလေးနဲ့။ ဗူးထဲကနေ ဇွန်းလေးနဲ့ ကော်ပြီး ဖျော်ရတာလေ။ အဲဒီ ကော်ဖီ။ နတ်ကော်ဖီလေ"
"ဟာ.. မင်းကတော့ လုပ်ပြီ။ အဲဒါ နတ်ကော်ဖီလဲ မဟုတ်ဘူး။ သိကြားကော်ဖီလဲ မဟုတ်ဘူး။ ဗြဟ္မာကော်ဖီလဲ မဟုတ်ဘူး။ နက်စ် ကော်ဖီပါကွ။ မင်းကလဲ နောက်ပိတ်တွေ ပျောက်လှချည်လား"
"သိပါတယ် သူကြီးမင်းရယ်။ အဲဒီလောက်ကြီး ကျနော် မညံ့သေးပါဘူး။ အခုတလော ကျနော် စိတ်နေလေလို့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါ နောက်ပိတ်တွေကို အမြဲတမ်း ဖြုတ်ထားလိုက်တယ်။ အထူးသဖြင့် အက်စ် အသံတွေကိုပေါ့"
"ကျနော့်အိမ်က ထမင်းဝိုင်းမှာ ကျနော့်ကို ပယ်ထားကြတယ်လေ။ ထမင်းစားရင်း စကားပြောရင် ပါးစပ်ထဲက ထမင်းလုံးတွေ ထွက်စင်လို့တဲ့။ ကျနော်ကလဲ ကျနော်ဘဲ။ ထမင်းစားရင်းနဲ့ ချက်တဲ့သူ စိတ်ချမ်းသာပါစေတော့ ဆိုပြီး ချီးကျူးစကားကို အင်္ဂလိပ်လို ပြောဖြစ်လိုက်တယ်ဗျ။ Very delicious, fantastic, Amazing, Unbelievable အစရှိတဲ့ စကားလုံးတွေကို ပြောရတာဆိုတော့လဲ တစ်ခါတစ်လေ တံတွေးထွက်လိုက်၊ တစ်ခါတစ်လေ ထမင်းလုံးလေးတွေ ထွက်စင်လိုက်တော့ ဖြစ်တာပေါ့။ အဲဒီလို ဖြစ်လို့တဲ့၊ ကျနော့်ကို သူတို့ ထမင်းဝိုင်းက ပယ်ထားကြတယ်လေ"
"အော်... ကျွတ် ကျွတ် သနားစရာဘဲ"
"သူကြီးမင်းကလဲ လူကို ရွဲ့နေပြန်ပါပြီ"
"ကဲ.. ကဲ.. မင့်ကို ရွဲ့ ဖို့လဲ အချိန်မရှိပါဘူး။ ဒီမှာ နက်စ်ကော်ဖီဗူး၊ ဒီမှာ သကြား၊ ဒီမှာ နို့မှုန့်၊ ဒီမှာ ကော်ဖီမိတ်၊ ဒီမှာက နို့စိမ်း။ မင်းကြိုက်သလိုသာ ဖျော်သောက်ပေတော့"
"ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါ သူကြီးမင်း။ ကျနော်တွေ့ဖူးတဲ့ သူတွေထဲမှာတော့ သူကြီးမင်းက ကျနော့်အပေါ် နားအလည်ဆုံးနဲ့ လူတွေအပေါ် စိတ်ကောင်း အရှိဆုံးဘဲ"
"မြှောက်မနေပါနဲ့ကွာ။ ၀အောင်သာ သောက်။ ပြီးတော့ ဒီ လဘက်သုပ်ကလေးလဲ စားလိုက်ဦး"
"လဘက်သုပ်နှင့်ကော်ဖီ တည့်ပါ့မလား သူကြီးမင်း။ တော်ကြာ အဆိပ်အတောက်တွေ ဖြစ်ကုန်မှ.."
"စကားမများနဲ့။ မင့်ကို ငါ သေဆေးကျွေးနေတာ မဟုတ်ဘူး။ လဘက်သုပ်နဲ့ ကော်ဖီနဲ့က Good Match လို့ ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါး ပြောဖူးတယ်။ ကော်ဖီကို ပိုပြီး အရသာ ရှိအောင် သောက်ချင်ရင် လဘက်သုပ်ကို အရင်စားပါတဲ့"
"ဟုတ်လား သူကြီးမင်း။ ဒါဖြင့် ကျနော် အားမနာတော့ဘူးနော်"
"အင်းပါ။ မင်းက ပထမတော့ တည့်ပါ့မလား အဆင်ပြေပါ့မလားနဲ့ စားပြီးသောက်ပြီးရင် စွဲသွားရော။ အဲဒီလို လူစားမျိုး"
"ဘာမဟုတ်ရမှာလဲ။ ပထမဆုံး မင့်ကို ကော်ဖီတိုက်တုန်းက မှတ်မိသေးတယ်။ မင်းက ကော်ဖီဆို မကြိုက်ဘူး။ လုံးဝ မသောက်ချင်ဘူး။ ပြီးတော့ အိပ်လို့ မပျော်မှာလဲ စိုးရိမ်ရတယ် ဆိုပြီး ငါတိုက်တဲ့ ပထမဆုံး ကော်ဖီကို မင်းက မသောက်သွားဘူး မဟုတ်လား။ နောက်ကျတော့လဲ အားနာလို့ သောက်ကြည့်ရင်းနဲ့ စွဲသွားရော။ အခုတောင် မင်း ကော်ဖီသောက်ချင်နေလို့ ငါ့ဆီ လမ်းလျှောက်လာသလိုလို ဘာလိုလို လုပ်ပြီး ၀င်လာတာ မဟုတ်လား။ အရူးကို အမဲသား ကျွေးမိသလို ဖြစ်နေပြီ"
"အရူးကို အမဲသားကျွေးမိရင် ဘာဖြစ်သလဲ သူကြီးမင်း"
"ဘာဖြစ်ရမှာလဲကွ။ နွားမြင်တိုင်း လက်ညိုး ထိုးပြနေတော့တာပေါ့"
"ဟား ဟား ဟား။ သူကြီးမင်းကတော့ ကြံကြံဖန်ဖန် ပြောတတ်တယ်။ ဒါနဲ့ စကားမစပ်။ ကျနော် မလာခင် သူကြီးမင်း ပါးစပ်က လှုပ်လှုပ် လှုပ်လှုပ်နဲ့ ရွတ်ဖတ်နေတာ ဘာတွေလဲဗျ။ သီချင်းဆိုနေတာတော့ မဟုတ်လောက်ဘူး ထင်ပါတယ်။ တစ်ခုခု မှုန်းမှုတ်နေသလိုဘဲ"
"မန်းမှုတ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ ငါ့ရဲ့ Own Theory လေးကို ရွတ်ဆိုကြည့်နေတာပါ"
"ဒီလိုကွ "မကြိုက်တဲ့ အရာကို ကြိုက်မိရင် ကြိုက်တဲ့ အရာကို ကြိုက်တာထက် ပိုကြိုက်သွားတတ်တယ်""
"ကျနော် နားမလည်ဘူး။ သူကြီးမင်း ရှင်းပြပါဦး"
"ဥပမာကွာ။ မင့်လိုပေါ့။ ပထမကတော့ ကော်ဖီကို လုံးဝ မကြိုက်ဖူးဆိုပြီး ဇွတ်ငြင်းနေခဲ့တာ မဟုတ်လား။ နောက် ကြိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ ကျန်တာတွေထက် ပိုကြိုက်သွားရောလေ။ ပိုကြိုက်လို့လဲ ငါ့ဆီ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး နေ့တိုင်း ကော်ဖီလာသောက်နေတာ မဟုတ်လား"
"ဟား ဟား ဟား။ သူကြီးမင်းကတော့ အခွင့်သာရင် နှိပ်ကွပ်မယ်ဆိုတာချည်းဘဲ။ ကျနော်က သူကြီးမင်း ကော်ဖီတွေ နှစ်ချို့ပြီး လွှင့်ပစ်ရမှာစိုးလို့ လာအကူအညီပေးနေတာပါ။ သောက်ချင်လွန်းလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဟီး ဟီး။ ဒါနဲ့ အဲဒီ "မကြိုက်တဲ့ အရာကို ကြိုက်မိရင် ကြိုက်တဲ့ အရာကို ကြိုက်တာထက် ပိုကြိုက်သွားတတ်တယ်" ဆိုတဲ့ သီအိုရီလေး ဖြစ်ပုံကို လုပ်ပါဦးဗျ။ သူကြီးမင်းဆီကဆို အထူးအဆန်းတွေ ကြားရတတ်လို့"
"အေး.. ငါကလဲ ပြောချင်နေတာနဲ့ အတော်ဘဲ။ ရွာထဲက လူတွေက ငါ့ကို သူကြီးမင်းဆိုပြီး ရင်းရင်းနှီးနှီး စကားမပြောရဲကြဘူး။ ဒီတော့ ငါလဲ စကားပြောရတာ မလွတ်လပ်ဘူး။ မင်းနဲ့မှ စကားပြောရတာ အဆင်ပြေတယ်။ ဒီသီအိုရီကို ငါက ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို အခြေခံပြီး ထုတ်ယူထားတာကွ"
"ရှေးရှေးတုန်းက ဒီ တုံးဖလားရွာမှာ အိမ်ခြေ ၉ အိမ်ဘဲ ရှိသတဲ့။ ငါ့ အဘိုးရဲ့ အဘိုးအိမ် အပါအ၀င်ပေါ့။ ငါ့ အဘိုးရဲ့ အဘိုး နာမည်က ဦးကျော်လှတဲ့။ သူ့မှာ ၀မ်းကွဲညီတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ ဦးညိုမြတဲ့။ လူပျိုကြီးပေါ့။ ဦးညိုမြ ငယ်ငယ်ကထဲက သူ့မိဘနှစ်ပါး ဆုံးသွားလို့ ငါ့အဘိုးရဲ့ အဘိုးက သူ့ကို အိမ်ပေါ် ခေါ်တင်ထားတယ်။ အဲဒီခေတ်တုန်းက လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးက အခုလောက် မကောင်းသေးဘူး။ တစ်ရွာနဲ့ တစ်ရွာ သွားချင်ရင် မြင်းစီးပြီး သွားရတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် အိမ်တိုင်းမှာ မြင်းတွေ မွေးမြူထားရတယ်။ ဦးညိုမြလဲ မြင်းတွေ မွေးထားတာပေါ့။ သူစီးနေကျ မြင်းနက်ကြီးကို တိမ်ကျားလို့ နာမည်ပေးထားတယ်"
"တစ်နေ့မှာ အဲဒီ သူစီးနေကျ တိမ်ကျားကြီး ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်သွားတယ်။ ဦးညိုမြလဲ ရွာနီးဝန်းကျင် အားလုံး လိုက်ရှာပေမဲ့ တိမ်ကျားကြီးကို မတွေ့ဘူးတဲ့။ ဒါနဲ့ သူ့မြင်းကြီး စားကျက်ရှာရင်းနဲ့ နယ်ကျွံသွားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဟိုဘက် ၀နာမြိုင်တောထဲများ ရောက်နေလားမသိဘူး ဆိုပြီး သစ်ပင်ပိတ်ပေါင်း အရမ်းထူထပ်တဲ့ ၀နာမြိုင်တောထဲ မြင်းပျောက်ရှာ ထွက်သွားသတဲ့" (တုံးဖလားရွာ တစ်ဝိုက်၌ ယနေ့တိုင်အောင် ကျွဲသူခိုး၊ နွားသူခိုး၊ မြင်းသူခိုးဟူ၍ လုံးဝ မရှိပေ။ ကြက်သူခိုးတော့ ရံဖန် ရှိတတ်၏။ ထို့ကြောင့် ကျွဲနွားပျောက်ပါက တောထဲဝင်ပြီး ရှာလျှင် ပြန်တွေ့လေ့ရှိ၏)။
"ဒီလိုနဲ့ ဦးညိုမြတစ်ယောက် မြင်းပျောက်ရှာဖို့ ထမင်းထုပ်ကိုင်စွဲပြီး ၀နာမြိုင်တောထဲ ၀င်ရောက်လာတယ်။ သူ့နားထဲ တိမ်ကျားရဲ့ လည်ပင်းမှာ ချိတ်ဆွဲပေးထားတဲ့ ခြူသံတွေကို ကြားနေရသလိုလို ဖြစ်နေသတဲ့။ အဲဒီလို အသံကြားသလိုလိုဖြစ်လိုက် တောနက်ထဲ ၀င်သွားလိုက်၊ ခြူသံက ဝေးသွားလိုက် တောနက်ထဲ ထပ်တိုးလိုက်နဲ့ ၀နာမြိုင်တောထဲ ခရီးအတော် ရောက်သွားသတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ တုံးဖလားရွာနဲ့ နှစ်ယူဇနာ အကွာလောက် ရောက်သွားသတဲ့"
"သူကြီးမင်း... ခဏလေး မရှင်းလို့။ စကားဖြတ်ပြောတယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့။ နှစ်ယူဇနာဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲ"
"အော်... မင်းက စာပေတွေ မဖတ်ဘဲ တစ်အိမ်တက်ဆင်း သွားလည်ဖို့လောက်တာ သိတာကိုး။ မှတ်ထားကွ။ တစ်ယူဇနာကို ၁၂ မိုင် ရှိတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် နှစ်ယူဇနာဆိုတာ ၂၄ မိုင်လို့ မှတ်လိုက်ပေါ့။ ဟုတ်ပြီလား"
"ဟုတ်ပါပြီ သူကြီးမင်း ဆက်ပြောပါ"
"အဲဒီ ၂ ယူဇနာ ခရီးပေါက်တော့ ညနေ မိုးချုပ်ကာနီး ဖြစ်သွားပြီ။ မြင်းပျောက်ကိုလဲ ရှာလို့ မတွေ့ဘူးတဲ့။ တုံးဖလားရွာဘက် ပြန်လာရအောင်လဲ လမိုက်ညလဲ ဖြစ်ပြန် လက်နှိပ်ဓါတ်မီးလဲ ပါမလာပြန်ဆိုတော့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့။ ဦးညိုမြ တစ်ယောက် ၀နာမြိုင်တောထဲမှာ စိတ်ဓါတ်တွေ ကျနေတော့တာပေါ့။ အဲဒီ အချိန်မှာ ခပ်လှမ်းလှမ်းက အသံဗလံတွေကို ကြားလိုက်ရသတဲ့။ နေ၀င်ပြီးကာစ အလင်းရောင်လေးကို အားပြုကာ အသံလာရာဖက်ကို အရဲစွန့်ပြီး ခြေဖွလို့ သွားလိုက်သတဲ့။ ၀နာမြိုင်တော အလယ်ထဲမှာ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အဆောက်အဦ တစ်ခုကို အံသြစွာ တွေ့လိုက်ရသတဲ့။ မိုးချုပ်ကာစမို့ ဆီးမီးအလင်းရောင်တွေက အဆောက်အဦအတွင်းကနေ အပြင်ကို ဖျာထွက်နေသတဲ့။ ဒါနဲ့ ဦးညိုမြလဲ စဉ်းစားမနေတော့ဘဲ အကူအညီတောင်းဖို့ အဲဒီ အဆောက်အဦထဲ ၀င်သွားလိုက်သတဲ့။ အဲဒီအထဲက လူတွေလဲ သူ့ကို မြင်သွားပြီး အထိတ်တလန့်ဖြစ်ကာ ဟောခန်းကြီးတစ်ခုထဲမှာ စုနေကြသတဲ့။ ဦးညိုမြလဲ ပါးစပ်က ကျနော် လူဆိုး မဟုတ်ပါဘူး။ လူကောင်းပါ။ အညီအကူတောင်းချင်လို့ လာခဲ့တာပါ။ မကြောက်ကြပါနဲ့ လို့ ပြောရင်း အဆောက်အဦထဲ ၀င်သွားလိုက်သတဲ့။ အထဲရောက်မှ ပိုပြီး အံ့သြစရာ ကောင်းတာက အဲဒီ လူတွေအားလုံးဟာ မိန်းခလေးတွေချည်း ဖြစ်နေသတဲ့။ ဒီထက် ပိုထူးဆန်းတာက အားလုံး တူညီဝတ်စုံ ၀တ်ဆင်ထားကြသတဲ့"
သူကြီးမင်းသည် ပုံပြင်ကိုလဲပြော ကော်ဖီကိုလဲ သောက် လဘက်သုပ်ကိုလဲ စားရင်း ပါးစပ် အတော်လေး အလုပ်ရှုပ်နေလေ၏။ နောက်ဆုံး လက်ကျန် ကော်ဖီလေးကို အဆုံးသတ်လိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်း သပ်လေ၏။ ပြီးနောက်...
"မောင်ပေါက်ကျော်ရေ... ကော်ဖီသောက်ပြီးတော့ ခံတွင်း ချဉ်လာသလိုဘဲ။ ရေနွေးကြမ်း သောက်ရအောင် ရေနွေး သွားကျိုလိုက်ပါဦး။ ပြီးတော့ ပြောရင်းနဲ့ မိုးကလဲ ချုပ်လာပြီ။ ဖယောင်းတိုင် မီးလဲ ထွန်းလိုက်ဦးနော်"
"အာ.. သူကြီးမင်းကလဲ စိတ်ဝင်စားမှန်းသိရင် အမြဲတမ်း ဈေးကိုင်တယ်။ ပုံပြင်ကို ပြီးအောင်ပြောပြီးမှ ရေနွေးကြမ်းသောက်လဲ ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ ပြီးတော့ မီးမထွန်းဘဲ ပြောလဲ ဖြစ်တာပါဘဲ။ စကားပြောတာဘဲ ကပြနေတာမှ မဟုတ်တာ။ မီးထွန်းဖို့ လိုသေးလို့လား"
"ခိုင်းတာသာ လုပ်စမ်းပါ ပေါက်ကျော်ရာ။ ငါ စိတ်ပါတုန်း မင့်ကို ပြောပြတာ။ စိတ်မပါရင် ငါက ဘာမှ ပြောချင်တော့တာ မဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ အခုပုံပြင်က True stroy ရယ်။ လုပ်ကြံပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ မင်း ဆက်ပြီး နားထောင်ချင်ရင်တော့ ခိုင်းတာကိုလုပ်။ ဟုတ်ပြီလား"
မောင်ပေါက်ကျော်တစ်ယောက်လဲ ပုံပြင်ထဲ စိတ်ဝင်စားနေပြီမို့ သူကြီးမင်းခိုင်းတာ လုပ်ပေးနေရ၏။ ရေနွေးကြမ်း ကျိုချက်ပြီး သူကြီးမင်းကို ပြုစုရ၏။ နောက် ဖယောင်းတိုင်မီး ထွန်းရ၏။ အားလုံး ကိစ္စပြီးမှ သူကြီးမင်းအား ပုံပြင် ဆက်ပြောရန် အသနား ခံရပြန်လေ၏။
"ကဲ.. သူကြီးမင်း.. အားလုံး ပြီးပါပြီ။ ပုံပြင်ကိုသာ ဆက်ပြောပါတော့"
"အင်း.. ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့.... အဲဒီ အဆောက်အဦထဲမှာ အမျိုးသမီး အပျိုတွေချည်း အယောက် ငါးဆယ်လောက် ရှိသတဲ့။ သူတို့အားလုံးကို အုပ်ချုပ်တဲ့သူကလဲ အပျိုကြီးတစ်ယောက်ဘဲတဲ့။ ချောလဲချောသတဲ့။ မျက်နှာကြည့်ရတာလဲ ကျက်သရေ အတော်ရှိသတဲ့။ အဲဒီ အပျိုမလေးတွေ ကြားထဲမှာ ခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီးက အရမ်းပေါ်လွင် ထင်ရှားနေသတဲ့။ သနားကြင်နာတတ်မဲ့ ပုံလဲ ပေါက်သတဲ့။ ဒါနဲ့ဘဲ ဦးညိုမြဟာ အဲဒီ ခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီးကို အသနား ခံတော့သတဲ့"
မောင်ပေါက်ကျော်တစ်ယောက် သူကြီးမင်း၏ တော်ကီကို နားထောင်လို့ ကောင်းနေတုန်း သူကြီးမင်းသည် စကားပြောရင်း တစ်ခုခုကို ဖြုန်းကနဲ သတိရသွားဟန်ဖြင့် စကားလမ်းကြောင်း ပြောင်းသွားပြန်လေ၏။
"အာ.. မောင်ပေါက်ကျော်ရေ.. မေ့နေလိုက်တာ။ ငါ ဒီနေ့ ည အစည်းအဝေးရှိတယ်ကွ။ သာယာကုန်းကို သွားရမယ်။ နဲနဲကို နောက်ကျနေပြီလားမသိဘူး။ မင်းရောက်လာလို့ ငါ သွားဖို့ မေ့နေတာ။ ငါ သွားမှ ဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်။ ပုံပြင်ကို မနက်ဖန်ညမှ ဆက်ပြောကြတာပေါ့ကွာ။ ဟုတ်ပြီလား"
"သူကြီးမင်း မနောက်နဲ့လေဗျာ။ သူကြီးမင်းက တော်တော့်ကို လူတွေကို နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်အောင်၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် လုပ်တတ်တာဘဲ။ ဒါကြောင့်လဲ သူကြီးရာထူးကို ရထားတာ ထင်တယ်။ အစည်းအဝေးရှိလဲ မသွားခင်လေး ပုံပြင်ကို အကျဉ်းချုပ်ပြီး အချုပ်ပြောထားခဲ့လေဗျာ"
"ဟား ဟား ဟား။ မောင်ပေါက်ကျော်တစ်ယောက် အတော်လေး ပုံပြင်ကို စိတ်ဝင်စားနေတာကိုး။ မင်းကလဲ ကလေးမဟုတ် ဘာမဟုတ်နဲ့ ပုံပြင်ကို စိတ်ဝင်စားနေတယ်။ ဧကန္တတော့ မင်း ကလေးစိတ် မပျောက်သေးဘူး။ ဟား ဟား ဟား"
"တော်ပြီ သူကြီးမင်းရာ။ မပြောချင်လဲ နေတော့ နားမထောင်တော့ဘူး။ ပြန်တော့မယ်"
"ဟာ.. မင်း အဲဒီလိုတော့ မလုပ်နဲ့လေကွာ။ ဟဲ ဟဲ ငါ စတာပါကွ။ ဘာအစည်းအဝေးမှ မရှိပါဘူး။ ဆက်ပြောမယ်။ ဟုတ်ပြီလား ဟဲ ဟဲ"
"တကထဲမှဘဲ" (ပေါက်ကျော် စိတ်ထဲမှ ရေရွတ်သံ)
"ဒီလိုကွ။ ဦးညိုမြက အဲဒီ ခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီးဆီမှာ ခွင့်တောင်းသတဲ့။ တုံးဖလားရွာကို ပြန်ရအောင်ဆိုတာကလဲ ၂၄ မိုင် ခရီးဆိုတော့ ပြန်လာလို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ ဒါနဲ့ တစ်ညလောက် သူတို့ဆီမှာ အိပ်ခွင့်ပြုဖို့ တောင်းဆိုတော့တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကို ခွင့်မပြုဘူး။ ခွင့်မပြုတဲ့ အကြောင်းပြချက်က သူတို့ဆီမှာ ယောက်ျားသားဆိုလို့ တစ်ယောက်မှ မရှိလို့တဲ့။ အဲဒီ အဆောက်အဦက အမျိုးသမီးတွေ အတွက်ဘဲဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်လို ယောက်ျားသားတွေကိုမှ လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ ပြောသတဲ့"
"သူကြီးမင်း... မရှင်းလို့... အဲဒီ အမျိုးသမီးတွေက အဲဒီ ၀နာမြိုင်တောထဲမှာ ဘာတွေ လုပ်နေကြတာလဲ။ သူတို့ အဲဒီလို နေထိုင်ကြတာကို ပတ်ဝန်းကျင် ရွာတွေကကော မသိကြဘူးလား"
"အေး.. မင်းမေးမယ်ဆိုလဲ မေးစရာဘဲ။ စိတ်ဝင်စားစရာတော့ အကောင်းသား။ အဲဒီ အမျိုးသမီးတွေ နေတဲ့ နေရာက ၀နာမြိုင်တောရဲ့ အလယ်လောက်မှာဆိုတော့ အဲဒီနေရာအထိ ဘယ်သူမှ မရောက်ဖြစ်ကြဘူးတဲ့။ ပြီးတော့ အဲဒီတော ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲ ရွာတွေ မရှိကြဘူးတဲ့။ တောတောင် သစ်ပင်တွေကလဲ အခုလို တောင်ကတုံးတွေ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ နေရောင်ထိုးလို့ မပေါက်နိုင်လောက်အောင်ကို တောထူထပ်သတဲ့။ အဲဒီ အမျိုးသမီးတွေက အားကစားတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ယောဂကျင့်စဉ်လို ကျင့်စဉ်တစ်မျိုးကို ကျင့်နေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေချည်းဘဲတဲ့။ လောကီရေးရာကိုလဲ စိတ်ကုန်သယောင် ဖြစ်နေကြတဲ့ အမျိုးသမီးအုပ်စုတွေတဲ့။ ခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီးက အားလုံးကို စည်းရုံးပြီး အဲဒီတောထဲမှာ အခြေချနေထိုင်ကြတာတဲ့။ အဲဒီလို နေထိုင်ကြတာကို ဘယ်သူမှ သတိမထားမိကြဘူးတဲ့။ အမျိုးသမီးတွေ အားလုံးကလဲ အချောအလှတွေချည်းဘဲတဲ့"
"ဟုတ်လား သူကြီးမင်း။ စိတ်ဝင်စားစရာဘဲ ဟီး ဟီး"
"နှာဗူး။ ဒါမျိုးကျတော့ စိတ်ဝင်စားပြီ"
"အာ.. သူကြီးမင်းကလဲ သူကြီးမင်းပြောနေတဲ့ ပုံပြင်ကို စိတ်ဝင်စားတာကို ပြောတာပါ။ တစ်လွဲမတွေးပါနဲ့"
"မင်းကတော့ မသိရင် ခက်မယ်။ အညစ်အကြေးဆို တစ်ဆစ်ကလေး ပြောမယ်မကြံသေးဘူး။ သွားရည် တမြားမြား ကျချင်နေပြီ။ ကဲ... ဆက်ပြောမယ်။ ဒီလိုကွ။ ဦးညိုမြက အသနားခံ တောင်းပန်လိုက်၊ အဲဒီ ခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီးက ငြင်းပယ်လိုက်နဲ့။ ညဉ့်ကလဲ အတော်နက်သွားသတဲ့။ ဦးညိုမြလဲ ဘယ်လိုမှ အသနားခံလို့ မရတာနဲ့ ထိုင်ငိုနေလိုက်တော့သတဲ့။ အဲဒီ အခါကျမှ အဲဒီ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်က တစ်ဆင့် လျှော့ပေးလိုက်သတဲ့။ ကဲ.. ဒီလောက် အခက်အခဲ ဖြစ်နေရင်လဲ လုပ်စရာ တစ်နည်းတော့ ရှိပါတယ်။ ဒီ အဆောက် အဦထဲမှာတော့ လက်မခံနိုင်ဘူး။ ဟို မြောက်ဘက် ခြံစည်းရိုးဒေါင့်က ကညင်ပင်ကြီးအောက်မှာဘဲ အိပ်ပါ။ ရော့ ဒီမှာ စောင်နှင့်ခေါင်းဆုံး ဆိုပြီး ခွင့်ပြုလိုက်သတဲ့။ ဦးညိုမြလဲ ဘယ်နေရာမှာမှ လက်မခံတာနဲ့ စာရင် ကညင်ပင်အောက်မှာ စောင်နဲ့ခေါင်းအုံးနဲ့ အိပ်ရလဲ မဆိုးပါဘူးဆိုပြီး အဲဒီ ကညင်ပင်အောက်မှာဘဲ ညအိပ်လိုက်ရသတဲ့"
"အဲဒီတော့ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်သေးလဲ သူကြီးမင်း"
"အင်း... ပုံပြင်က အဲဒီအချိန်က စပြီး ကောင်းခန်း ရောက်တော့တာပါဘဲ"
"ဦးညိုမြတစ်ယောက် ကညင်ပင်အောက်မှာ ခြင်ကကိုက် ကြောက်စိတ်ကလဲ နဲနဲဝင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကလဲ မှောင်မိုက်နေဆိုတော့ တွေးရင်းတွေးရင်း အဲဒီ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်ကို အခဲ မကြေ ဖြစ်နေသတဲ့။ သူ့ကို အဆောက်အဦထဲမှာ လက်မခံတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပေါ့။ အိပ်လို့လဲ မပျော်ဘဲ ဖြစ်နေသတဲ့။ ဒါနဲ့ မကောင်းတဲ့ စိတ်တွေ ၀င်လာတော့တာပေါ့။ ငါ ယောက်ျားတန်မဲ့ ဒီလောက် အသနားခံ အကူအညီတောင်းတာကိုတောင် ရက်ရက်စက်စက် ငြင်းလွှတ်တယ်။ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူကို မကူညီဘူး။ လူသား မဆန်ဘူး။ ဒီတော့ ငါတစ်ခုခုလုပ်ပြီး ပြန်ကလဲ့စား ချေရမှ စိတ်ကျေနပ်မယ်ဆိုပြီး မကောင်းတဲ့ စိတ်တွေ ၀င်ကုန်တော့တာပေါ့"
"ဦးညိုမြက ကျေးဇူးကန်းလိုက်တာ။ ကျေးဇူးရှင်ကို ကလဲ့စားချေမယ်တဲ့။ အေးပေါ့လေ။ သူကြီးမင်း ဆွေမျိုးဆိုတော့လဲ ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့။ ဟဲ ဟဲ ဟဲ"
"ခွေးကောင် ပေါက်ကျော်။ အေးအေးဆေးဆေး နားထောင်၊ ကောင်းခန်း ရောက်လာပြီ။ ပုံပြင်ဆုံးမှ ဦးညိုမြဟာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ မင်းသိလာလိမ့်မယ်"
"ဟား ဟား။ သူကြီးမင်းက ခင်ဖို့ကောင်းတယ်။ ဆက်ပြောပါ သူကြီးမင်း"
"ဦးညိုမြဟာ အဆောက်အဦထဲ ရောက်စဉ်ကထဲက အဆောက်အဦအခြေအနေကို လေ့လာထားပြီးသားတဲ့။ ကျန်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အားလုံးက ဟောခန်းထဲမှာ စုပြီး အိပ်ကြပေမဲ့ ခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီးကတော့ အိပ်ခန်း သီးသန့်နဲ့ အိပ်သတဲ့။ အဆောက်အဦက ကျယ်တော့ အမျိုးသမီးတွေ အိပ်ကြတဲ့ ဟောခန်းနဲ့ ခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီး အိပ်တဲ့ အခန်းက နဲနဲ ဝေးကွာနေသတဲ့။ အဲဒါဟာ သူ့အတွက် အခွင့်ကောင်း ဖြစ်သွားသတဲ့။ ညသန်းခေါင်ကျော်မှာ အားလုံး အိပ်မောကျနေပေမဲ့ ဦးညိုမြက အိပ်လို့ မရနိုင်ဘူးတဲ့။ ခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီးအပေါ်ကို မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး တောက် တစ်ခေါက်ခေါက် ဖြစ်နေသတဲ့။ အဆောက်အဦတစ်ခုလုံးလဲ ဘာမီးရောင်မှ မတွေ့ရတော့ဘူးတဲ့။ ဒါနဲ့ ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ အဲဒီ ခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီးအိပ်တဲ့ အိပ်ခန်းကို တွယ်တက်ပြီး ပြတင်းပေါက်ကို ဖြေးဖြေးချင်း ဖွင့်ကြည့်လိုက်သတဲ့။ သူကဘဲ ကံကောင်းတာလား၊ ခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီးကဘဲ ကံဆိုးတာလား မသိ၊ ပြတင်းပေါက် တံခါးလေး ပွင့်သွားသတဲ့။ ဒါနဲ့ သူလဲ ပြတင်းပေါက်ကနေပြီး အခန်းထဲကို လွှားကနဲ ခုန်ဝင်လိုက်သတဲ့"
"သူကြီးမင်း.... ဦးညိုမြက ဘာဖြစ်လို့ ခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီးအခန်းထဲ အဲဒီလို တိတ်တဆိတ် ၀င်သွားတာလဲ မသိဘူး။ ပစ္စည်းတွေ သွားခိုးတာလား"
"မင်းကလဲ တုံးလိုက်တာ။ ပစ္စည်းသွားခိုးတာ မဟုတ်ဘူးကွ။ လူသွားခိုးတာ။ ခိုးတာ ဆိုတာထက် ဓါးပြသွားတိုက်တာ"
"ဘုရား ဘုရား ဓါးပြသွားတိုက်တာ"
"ဟုတ်တယ်။ ဓါးပြသွားတိုက်တာ။ ဓါးပြမှ ရိုးရိုးဓါးပြမဟုတ်ဘူး။ ကာမဓါးပြသွားတိုက်တာ"
"ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ ငါ့အထင်ကတော့ ဦးညိုမြတစ်ယောက် ကာမရယူချင်တာထက် ခံပြင်းစိတ်ကြောင့် အခုလို ကြံစည်လိုက်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်"
"အဲဒါနဲ့.. အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်ကကော ဦးညိုမြ လိုချင်တာ ပေးလိုက်ရောလား"
"မပေးဘူး။ ဦးညိုမြ ပြတင်းပေါက်က ခုန်ဝင်လာလာချင်းဘဲ အဲဒီခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးလဲ လန့်နိုးလာသတဲ့။ ဒါနဲ့ ဘယ်သူလဲ။ မနာချင်ရင် ပြန်ထွက်သွားပါ ဆိုပြီး အမိန့်ပေးသတဲ့။ ဦးညိုမြလဲ ပေါက်တဲ့ နဖူး မထူးပါဘူးဆိုပြီး အဲဒီ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်ကို အတင်းဝင်ပူးပြီး အသင့်ပါလာတဲ့ ဓါးမြှောင်နဲ့ လည်မျိုကို ထောက်ပြီး အသံထွက်ရဲရင် ထွက်ကြည့် ငါ့ကို ဘာထင်လဲ ဆိုပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခပ်မာမာနဲ့ ချိန်းခြောက်လိုက်သတဲ့။ ပြီးတော့ အတင်းအဓမ္မ ကာမပြုကျင့်ဖို့ အားထုတ်သတဲ့။ အဲဒီအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်ကလဲ လောကီရေးရာတွေကို စိတ်မ၀င်စားလို့ အခုလို တောထဲမှာ လာနေတာ၊ သူ့ကို အဲဒီလို အနိုင်မကျင့်ပါနဲ့။ လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းပေးပါ့မယ်ဆိုပြီး တောင်းပန်သတဲ့။ ဦးညိုမြလဲ ငါလိုချင်တာ ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး။ လူကို လိုချင်တာဆိုပြီး ရုန်းကန်နေတဲ့ ကြားထဲက အတင်းဗလက္ကာယ ပြုကျင့်လိုက်တော့သတဲ့။ ဦးညိုမြတစ်ယောက် သူစိတ်ကျေနပ်သလောက် ပြုကျင့်ပြီးမှ ပြတင်းပေါက်က တစ်ဆင့် ခုန်ဆင်းလာပြီး ကညင်ပင်အောက်မှာဘဲ ဣနြေ္ဒမပျက် ပြန်အိပ်နေလိုက်သတဲ့။ မနက်မိုးလင်းတော့ အိပ်ရာက ထ၊ ပြီးတော့ အဆောက်အဦထဲ ၀င်သွားပြီး အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်ဆီ ခပ်တည်တည်နဲ့ သွားတွေ့ပြီး အခုလို ခြံစည်းရိုးနားက ကညင်ပင်အောက်မှာ တစ်ည အိပ်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအရမ်းတင်ကြောင်း၊ အခုတော့ နွားပျောက်ကို ထပ်ရှာရဦးမှာမို့ ပြန်တော့မဲ့အကြောင်း ပြောပြီး နှုတ်ဆက်စကား ဆိုလိုက်သတဲ့"
"အဲဒါနဲ့ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင် သူ့ကို ဘာလုပ်လိုက်သလဲ။ ဆဲလွှတ်လိုက်သလား။ ဒါမှ မဟုတ် ပါးချ လွှတ်လိုက်သလား"
"ဘယ်ကလာ မောင်ပေါက်ကျော်ရာ။ အဲဒီလို သွားနှုတ်ဆက်တဲ့အခါ အဲဒီ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင် ပြောတဲ့ စကားကို ကြားရရင် မင်း အတော်လေး အံ့သြသွားလိမ့်မယ်"
"ဟုတ်လား သူကြီးမင်း။ အဲဒီအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်က ဘာပြောလိုက်သလဲ။ ရဲတိုင်မယ်လို့ ပြောလိုက်တာလား"
"မဟုတ်ဘူး။ လုံးဝ မဟုတ်ဘူး။ မင်းကတော့ ခန့်မှန်းလိုက်ရင် အလွှဲတွေချည်းဘဲ"
"ဒါဖြင့် အဲဒီ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်က ဘယ်လို ပြောလိုက်သလဲ"
"ဦးညိုမြ နှုတ်ဆက်စကား သွားပြောတော့ အဲဒီအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်က ဒီလို ပြောလိုက်သတဲ့။ "အေးကွယ်... နောက်ဆိုရင် မြင်းပျောက်ပျောက် မပျောက်ပျောက် လာလည်လို့ ရပါတယ်။ အမြဲတမ်း ကြိုဆိုနေပါတယ်"လုိ့ ပြောလိုက်သတဲ့"
"ဟင်....... မြင်းပျောက်ပျောက် မပျောက်ပျောက်....."
"အင်း ဟုတ်တယ်။ မင်း အံ့သြသွားတယ် မဟုတ်လား"
"မအံ့သြဘဲ ဘယ်နေပါ့မလဲ သူကြီးမင်းရာ။ ကိုယ့်နားကို ကိုယ်တောင် မယုံချင်သလိုလိုဘဲ"
"အေး... ဒီထက် မင်း ပိုပြီး အံ့သြရဦးမယ်"
"ဦးညိုမြလဲ အပြန်လမ်းမှာ ကံကောင်းစွာနဲ့ဘဲ တိမ်ကျားကို ပြန်ရှာတွေ့ခဲ့သတဲ့။ အဲဒီနေ့ကစပြီး ဦးညိုမြတစ်ယောက် တစ်လမှာ ရက်နှစ်ဆယ်လောက် မြင်းပျောက်လို့ချည်း နေသတဲ့။ မြင်းပျောက်တိုင်းလဲ ညအိပ် မြင်းရှာထွက်သတဲ့။ နောက်ပိုင်းကျတော့ ဦးညိုမြတစ်ယောက် မြင်းပျောက်နေတာနဲ့ မတင်းတိမ်နိုင်တော့ဘဲ တရားဝင် အိမ်ထောင်ကျသွားတော့သတဲ့။ သူယူတဲ့ အမျိုးသမီးကတော့ သိတဲ့ အတိုင်း သူအနိုင်ကျင့်ပြီး အတင်းအဓမ္မပြုထားတဲ့ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်ဘဲ ဖြစ်တော့သတဲ့။ သူအိမ်ထောင်ကျပြီး အဘိုးရဲ့ အဘိုးအိမ်ကနေပြီး အိမ်ခွဲထွက်သွားသတဲ့။ ဒါနဲ့ ဒီတုံးဖလားရွာမှာ အိမ်ခြေတစ်အိမ်တိုးပြီး ၁၀ အိမ် ဖြစ်သွားသတဲ့"
"တကယ်ကြီးလား။ မအံ့သြဘဲကို မနေနိုင်တော့ဘူး။ လုံးဝ သဘောမတူဘဲ အနိုင်ကျင့်ပြီး ကာမကို အယူခံထားရတဲ့သူက အနိုင်ပြုကျင့်တဲ့ သူနှင့် ရာသက်ပန်အတူနေသွားကြတယ်ဆိုတော့......"
"အဲဒါကြောင့် ပြောတာပေါ့။ "မကြိုက်တဲ့ အရာကို ကြိုက်မိရင် ကြိုက်တဲ့ အရာကို ကြိုက်တာထက် ပိုကြိုက်သွားတတ်တယ်" လို့။ ဘယ်လိုလဲ ငါ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် သီအိုရီလေး မမှန်ဘူးလား"
"သွေးထွက်အောင် မှန်ပါတယ် သူကြီးမင်း"
"အေး သွေးထွက်အောင် မှန်မှာပေါ့ကွ။ အဲဒီ ဦးညိုမြနှင့် အိမ်ထောင်ကျတဲ့ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်ရဲ့ နာမည်က ဒေါ်အေးတင်တဲ့။ သူတို့အိမ်ထောင်ကျပြီး သမီးလေး တစ်ယောက် မွေးတယ်။ နာမည်က ကြည်တင်တဲ့။ ကြည်တင် အရွယ်ရောက်တော့ အိမ်ထောင်ကျပြီး သားတစ်ယောက် မွေးတယ်။ ဦးဘမောင်တဲ့။ အဲဒီ ဦးဘမောင်ဟာ တစ်ခြားသူ ဟုတ်ပါရိုးလား မောင်ပေါက်ကျော်ရ။ မင့် အဘိုး (မင့်အမေရဲ့ အဖေ) ဦးဘမောင်ပါဘဲ"
"ဟာ... တကယ်လား။ ဒုက္ခဘဲ။ ဒါဆို ဦးညိုမြဟာ ကျနော့် အမျိုး အရင်းခေါက်ခေါက်ကြီးပေါ့"
"အင်း... အဲဒါကြောင့် မင့်ကို ပြောတာ။ ပုံပြင်ပြီးဆုံးသွားမှ ဦးညိုမြဟာ ဘယ်သူ့အမျိုးလဲဆိုတာ မင်း သိလာမယ်လို့"
"မယုံနိုင်စရာပါဘဲ သူကြီးမင်းရာ။ ဒါနဲ့... အဲဒီ အမျိုးသမီးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ အဆောက်အဦရယ်၊ သူ့တပည့်မလေးတွေရယ်၊ အဲဒါတွေက ဘယ်လို ဖြစ်သွားလဲ"
"သူ အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးကထဲက အဲဒီ အမျိုးသမီးတွေ အကုန်းလုံး ကိုယ့်ရွာကိုယ် ပြန်ကြဖို့ သူပြောလိုက်သတဲ့။ ဒါနဲ့ အကုန်လုံး အဲဒီတောကြီးထဲက ပြန်သွားကြတယ်တဲ့။ အဆောက်အဦကြီးတော့ ဒုတိယကမ္ဘာ စစ်အတွင်းက ဗုံးဒဏ်မိပြီး မီးလောင်ပျက်စီးသွားသတဲ့။ အခုကတော့ ၀နာမြိုင်တောကြီးလဲ တောတွေပြုန်းနေပါပြီ။ အဲဒီ အဆောက်အဦနေရာလဲ ဘယ်အနားမှာဆိုတာ ဘယ်သူမှ မမှတ်မိကြတော့ပါဘူး။ မောင်ပေါက်ကျော်ရေ.. ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါဘဲ"
ဤသို့ဤနှယ် လွန်စွာမှ ရှည်လျားထွေပြားလှသည့် ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို မြိန်ရည်ယှက်ရည် ပြောဆိုပြီး သူကြီးကိုကိုမောင်လဲ အကြမ်းပန်းကန်ထဲမှ ရေနွေးကြမ်းကို အားရပါးရ ဂလု ကနဲ မြည်အောင် မော့သောက်လိုက်လေ၏။ မောင်ပေါက်ကျော် တစ်ယောက်လဲ ယုံတစ်ဝက် မယုံတစ်ဝက်ဖြင့် မျက်လုံးကလေး ကလည်ကလည်နဲ့ ပြုံးစိစိ ဖြစ်နေလေတော့၏။
"ကဲ.. သူကြီးမင်းရေ... ကော်ဖီလေးကလဲ ကောင်း၊ ပုံပြင်လေးကလဲ ကောင်း၊ ကျေးဇူးပဲဗျို့ ။ ပြန်လိုက်ဦးမယ်"
"ဟေ့ကောင် ပေါက်ကျော်.. မင်းသောက်ထားတဲ့ ကော်ဖီပန်းကန်လေးတော့ ဆေးထားခဲ့ဦးလေကွာ၊ ငါကိုယ်တိုင် ဆေးကြောနေရတာချည်းဘဲ။ မင်းတို့ လုပ်လိုက်မှ ငါက လင်းဘက်လဲ စိုက်ရသေး၊ ရေနက်ကလဲ နေရသေး ဖြစ်နေတယ်"
"ဆောရီး သူကြီးမင်းရာ... ကျနော်လဲ အိမ်ပြန်ပြီး နွားပျောက်ချင်စိတ်ပေါက်နေလို့ စိတ်မြန်သွားတာ။ မြင်းမရှိမှတော့ ရှိတဲ့ နွားပျောက်ပြီး အဘိုးရဲ့ အဘိုးလို လုပ်ရမလား စဉ်းစားနေတာ။ ဟဲ ဟဲ။ ဆောရီး ဆောရီး ဆောရီး နော်။ ဟီး ဟီး မနက်ဖန် ညနေလဲ လာခဲ့မယ်နော် သူကြီးမင်း။ ကြိုတင် ဘုတ်ကင် လုပ်ထားတာ"
မျက်နှာချိုသွေးကာ မေ့ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး မဆေးဘဲ ထားခဲ့တဲ့ ကော်ဖီပန်းကန်ကို ဆေးကြောပြီး ပေါက်ကျော်တစ်ယောက် လေးကလေး တချွန်ချွန်ဖြင့် သူ့နေအိမ်သို့ ပြန်သွားလေတော့၏။ ပေါက်ကျော်ရဲ့ နောက်ကျောကို ကြည့်ပြီး သူကြီးမင်းလဲ မောင်ပေါက်ကျော်တစ်ယောက် ကော်ဖီကို အရူးအမူး ကြိုက်တတ်လာပုံ၊ ပုံပြင်ထဲက အပျိုကြီးရဲ့ မြင်းပျောက်ပျောက် မပျောက် လာခဲ့ပါလို့ ပြောပုံတို့ကို စဉ်းစားတွေးတောနေရင်း ပါးစပ်ကလဲ သူ့သီအိုရီလေးကို တတွတ်တွတ် ရွတ်ဆိုနေလေတော့၏။
မောင်ပေါက်ကျော်အား နှိပ်ကွပ်လို၍ သူကြီးမင်းတီထွင်ပြောသော ပုံပြင်သာ ဖြစ်၏။ အဖြစ်ပျက်အမှန်မဟုတ်ချေ။ မိမိကို အနိုင်ကျင့်ထားသူအား အဘယ်သူသည် ပေါင်းဖော်အံ့နည်း။ (ကိုကိုမောင်၊ပန်းရနံ့)။ ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 13:08
ပုံပြောကောင်းသော တဂျီးမင်းပါ တကားးးး
မကြိုက်တဲ့အရာကို ကြိုက်မိရင် ကြိုက်တဲ့အရာကို ကြိုက်တာထက် ပိုကြိုက်သွားတတ်တယ်။
တဂျီးမင်းရဲ့ ဖလော်ဆိုဖီ မိုက်တယ်။ ငယ်ငယ်က အချိုပဲ ကြိုက်တယ်။ အခါးမကြိုက်ဘူး။ ကြီးတော့ အခါးအကုန်ကြိုက်တယ်။ ကြက်ဟင်းခါး၊ ကြောင်လျှာ၊ တမာ၊ ခွေးတောက်၊ ဘီယာ .. အဲ .. ယောင်လို့။ :P
တဂျီးရော အခု ဘာကြိုက်နေပြီလဲ။ အရင်က မကြိုက်တဲ့ဟာ တခုခုများ ကြိုက်နေပြီလား .... အဟမ်းးးး
Thursday,3March 2011 at 13:37:00 GMT
လုပ်ဘိုးဟီဘစ် (၀ါ) တီးဖလားသဂျုံး (ခ) သဂျောင်ကိုမီး @ ကိုကိုမောင် (ပန်းရနံ့) ၏ အထံတော်တွင် အင်းဂလိစာ သင်တန်း တက်ချင်ပါသည်။
သင်တန်းကြေးတောင်းခြင်း သည်းခံပါ။ သင်တန်းသားကို (နောက်ပိတ်မပါသော) နတ်ကော်ဖီနေ့တိုင်း တိုက်ရမည်။
မရှင်းတာ တခုမေးပါအုံးမည်။ "လင်းဘက်လဲ စိုက်ရသေး ရေနက်ကလဲ နေရသေး" ဆိုတာ နားမလည်ပါ။ အနက်ပြန်ပေးပါ။ (အမဲမဟုတ်)
Thursday,3March 2011 at 13:51:00 GMT
သူကြီးမင်း ရော ..
မကြိုက်တဲ့ အရာကို ပိုပြီး ကြိုက်မိတာများ
ရှိပါသလား .. ???
(( နောက်တာ ))
Thursday,3March 2011 at 15:07:00 GMT
သူကြီးမင်းခေါ် လုပ်ဂ်ဘိုးလ် ဟီဘစ်ဂ်..
မကြိုက်ခဲ့တာတွေတွေကို ကြိုက်မိတဲ့ သူတစ်ယောက် နွားမြင်တိုင်းလက်ညှိုးထိုးသလို ဖြစ်နေပြီလား မသိ။
( လဘက်သုပ်နဲ့ ကော်ဖီနဲ့က Good Match လို့ ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါး ပြောဖူးတယ်။ )
Thursday,3March 2011 at 16:43:00 GMT
စာလာဖတ်သွားတယ် အကိုရေ.။မှတ်သားစရာလေးအတွက် ကျေးဇူးပါအကို။
Thursday,3March 2011 at 21:06:00 GMT
မှတ်သားစရာလေးတွေရော ရယ်မောစရာလေးတွေရော ... ဖတ်လို့ကောင်းတယ်...။၀တ္ထုက နဲနဲရှည်တော့ နတ်ကော်ဖီတစ်ခွက်ဖျော်လိုက် သောက်လိုက်နဲ့ ပြီးအောင်ဖတ်သွားတယ်းD
Friday,4March 2011 at 02:49:00 GMT
ဘကျောက်တို့ကတော့ ကြိုက်ပြီးရင်း ကြိုက်ရင်းပဲ..
Friday,4March 2011 at 03:05:00 GMT
ပုံပြောကောင်းတဲ့ သူဂျီးပါလား.. ဟဟဟ
Friday,4March 2011 at 03:16:00 GMT
"လင်းဘက်လဲ စိုက်ရသေး ရေနက်ကလဲ နေရသေး" ဆိုတာ မကြားဖူးဘူး။ အဲသာပြောပြပါ။
Friday,4March 2011 at 03:46:00 GMT
သူဂျီးမင်းက ကော်ဖီလည်းတိုက် ပုံပြင်လည်းပြော
ကြက်သား၊ပုဇွန်၊ ၀က်သား အဲဒါတွေ မကြိုက်ဘူးနော်
ကြိုပြောထားတာ အဲဒီဟင်းတွေနဲ့ ကျွေးပါ။
ဒါမှ မကြိုက်တဲ့ အရာတွေကို ကြိုက်သွားအောင်လို့ :)
Friday,4March 2011 at 04:03:00 GMT
မကြိုက်တဲ့အရာကို ကြိုက်မိရင် ကြိုက်တဲ့အရာကို ကြိုက်တာထက် ပိုကြိုက်သွားတတ်တယ်။ အဲဒါလေးတော့ မှန်တယ်။ ငယ်ငယ်က ငရုတ်သီးမစားနိုင်ဘူး။ ဟော အခု သူမပါရင် စားလို့ကို မ၀င်ဖြစ်နေပြန်ရော။
Friday,4March 2011 at 05:32:00 GMT
လယ် ကွက်ကို အမွေခွဲကြတော့ ကိုယ်ရတဲ့ဖက်က ..
လင်းရိပ်မိနေပြန်..လင်းရိပ်ဆိုတာ လယ်ကန်သင်းမှာသစ်ပင်ကြီးတွေ ပေါက်နေလို့ အရိပ်ကျနေတာ..ရေကလဲ မြေနိမ့်ပိုင်းဆိုတော့ လယ်ရေကနက်နေပြန်..အဲဒီတော့ လင်းဖက်လဲစိုက်ရသေး ရေကနက်သေးတော့ ဒီလယ်ဘယ်အထွက်ကောင်းပါတော့မလဲ...
မြို့သားတွေကတော့ ဒို့တောစကားပုံတွေ ဘယ်နားလည်ပါ့မလဲ..
Friday,4March 2011 at 08:31:00 GMT
ကောက်စိုက်သမ အနေနဲ့ ကြ အပေါ်က အဓိပ္ပါယ်မဟုတ်ဘူး...
လင်းဘက်က နေပူတဲ့ဖက်..နေကလဲပူ ရေကလဲနက်ဆိုတော့ ပင်ပန်းတာပေါ့..
Friday,4March 2011 at 08:35:00 GMT
ကောက်စိုက်သမလင်းက နေပူတာမဟုတ်ဘူး..ခုမှစဉ်းစားမိတယ်..သဂျီးပဲ အနက်ပြန်ပေးလိုက်ပါ ကျနော်ရေးရင် ပိုပို လွဲတော့မယ်..
Friday,4March 2011 at 08:47:00 GMT
ဒီအတွေးအခေါ်ကို ထောက်ခံတယ် သဂျီး
နောက်မှ သေသေချာချာ ရေးမလို့ ကြံထားတယ်။
Friday,4March 2011 at 10:44:00 GMT
မကြိုက်တဲ့ အရာကို ကြိုက်မိရင် ကြိုက်တဲ့ အရာကို ကြိုက်တာထက် ပိုကြိုက်သွားတတ်တယ်" ဒါကို အကြိုက်ဆုံးပဲ သူကြီး :P
Friday,4March 2011 at 11:07:00 GMT
ဒါက ဒီလိုရှိပါတယ်။ (လေရှည်တော့မဲ့ပုံ) :D
လင်းဘက်ဆိုတာ ငါးဖမ်းကိရိယာတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ စာလုံးပေါင်းအမှန်က လင်းပက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူကြီးမင်းလဲ စာလုံးပေါင်းတွေ အမှားပေါင်း ထောင်သောင်းချီနေတာဆိုတော့ အဘိဓာန်ထဲ ပြန်လှန်ကြည့်ရတယ်။ ပြီးတော့ ဂူးဂဲလင်း ပြန်လုပ်ကြည့်ရတယ်။ အသုံးနည်းတဲ့ ငါးဖမ်း ကိရိယာဆိုတော့လဲ အင်တာနက်ထဲတောင် သိပ်မတွေ့ဘူး။ မရွှေစင်ရဲ့ ကြယ်နီအပိုင်း ၄၃ မှာနဲ့ အွန်လိုင်းအဘိဓာန်တစ်ချို့မှာဘဲ တွေ့တယ်။
သူကြီးမင်းဆီမှာတော့ ဘိရုမာပြည်က ယူဆောင်လာခဲ့တဲ့ မြန်မာ အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်ရှိပါတယ်။ ဒါနဲ့ အဲဒီ အထဲ လှန်လော ကြည့်လိုက်တော့ စာမျက်နှာ ၄၅၀ မှာ ဒီလိုလေးတွေ့တယ်။ လင်းပက်=Kind of drag-net used in shallow water. ဆိုပြီး တွေ့တယ်။
သူကြီးတို့ဆီမှာက မြစ်တို့ အင်းတို့ ရေပြင်ကျယ်ကြီးတို့ မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ငါးဖမ်းပိုက်တို့ ကွန်တို့ ငါးဖမ်းစက်လှေတို့ဆိုတာ ကြားတောင် မကြားဖူးဘူး။ စာအုပ်ထဲမှာဘဲ မြင်ဖူးကြတာ။ ရွာနား တစ်ဝိုက်မှာ ချောင်းတို့ မြောင်းတို့လောက်ဘဲ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီ ချောင်းမြောင်းတွေထဲ ငါးဖမ်းတဲ့အခါ အများဆုံး သုံးတာက လင်းပက်နှင့် ယက်သဲ့ပါဘဲ။ ယက်သဲ့ဆိုတာကော ကြားဖူးကြသလားတော့ မသိဘူး။ သူကြီးမင်း ထွင်တဲ့ စကားလုံး မဟုတ်ရပါဘူး။ အဘိဓာန်ထဲမှာလဲ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူကြီးမင်းတို့ ဘက်က အသုံးပြုတဲ့ ယက်သဲ့က အဘိဓာန်ထဲက ဓါတ်ပုံနဲ့ မတူဘူး။ အဘိဓာန်ထဲကပုံက တစ်ခြမ်းပဲ့ကြီး။ သူကြီးမင်းတို့အရပ်က ယက်သဲ့က တောင်းတစ်လုံးလို အ၀ိုင်းကြီး။
နောက်ပြီး မြုံးဆိုတာကတော့ လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ ပြုံးစိစိနဲ့ မြုံးမိတဲ့ ငါးလို ဆိုတဲ့ စကားပုံတောင် ရှိသေးတာဘဲ။
ငါတွေ ဖမ်းပြီးတဲ့အခါ ထည့်ဖို့ကျတော့ တင်ချောင် ဆိုတဲ့ဟာကို သုံးတယ်။ ခါးမှာ လွယ်ထားတဲ့ ၀ါးနှင့် ယက်လုပ်ထားတဲ့ ငါးတို့ ပုဇွန်တို့ ထည့်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ အဲဒီ တင်ချောင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အဘိဓာန်ထဲလဲ ရှာမတွေ့ အင်တာနက်မှာလဲ ရှာမတွေ့ပါဘူး။ စာလုံးပေါင်း မှားနေပြန်တာလား မသိပါဘူး။ ရွာဘက်မှာတော့ အသုံးပြုနေကြတာဘဲ။ တင်ချောင်လား သင်ချောင်လားတော့ မသိဘူး။ သူကြီးမင်းတို့ တုံးဖလားသားတွေကတော့ တင်ဂျောင်ဆိုပြီး အသံထွက်တယ်။ (ဆက်ရန်)
Friday,4March 2011 at 12:06:00 GMT
ကဲ... လင်းဘက်(လင်းပက်) ဖက် ထပ်သွားဦးမယ်။ လင်းပက်ဆိုတာ သူကြီးမင်းတို့ ခြုံတဲ့ စောင်ထက် ခပ်သာသာ အရွယ်အစားရှိတဲ့ အကွက် စိပ်စိပ် ယက်လုပ်ထားတဲ့ နိုင်လွန်စတစ်မျိုးပါဘဲ။ ပိုက်ပုံစံမျိုးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ပိုက်လိုတော့ ကြိုးမသေးဘူး။ အနံနှစ်ဖက်မှာ ၀ါးလုံးရှည်နှစ်ခု တပ်ထားတယ်။ လက်ကိုင်ပြီး အသုံးပြုဖို့ပါ။ အလျား နှစ်ဖက်(နဘေးသားလေးတွေ)မှာတော့ ခဲတုံးလေးတွေ ညှပ်ထားတယ်။ အလေးချိန်စီးအောင်လို့ပေါ့။ ရေထဲချတဲ့အခါ ရေအောက် ကြမ်းပြင်ကို ထိကပ်နေအောင်လို့လေ။
အဲဒီလင်းပက်ကို နှစ်ယောက် အသုံးပြုရတယ်။ ဘယ်တစ်ယောက် ညာတစ်ယောက် ကိုင်ပြီး ချောင်းထဲ မြောင်းထဲ ပိုက်စိပ်တိုက် ထိုးကြတာပေါ့။ များသောအားဖြင့် မိန်းခလေးတွေ လုပ်ကြတာပါ။ ယောက်ျားတွေ မလုပ်ကြဘူး။ အဲဒီလို ပိုက်စိပ်တိုက် ထိုးတဲ့အခါ လင်းပက်ထဲမှာ အမှိုက်တွေရော ပုဇွန်တွေရော ငါးတွေရော ရေသတ္တ၀ါတွေ စုံနေတာဘဲ။ လာမိကြတယ်။ အမှိုက်တွေ ဖယ်ထုတ်ပြီး လိုချင်တဲ့ ငါးတို့ ပုဇွန်တို့ကို ဖမ်းပြီး ခါးမှာ ချည်ထားတဲ့ တင်ချောင်ထဲ လက်ပြန်ထည့်လိုက်ကြတာပါဘဲ။ မျက်စိထဲတော့ မြင်လား မသိဘူး။ သူကြီးမင်းက ပုံဖော်စာရေးနည်း ခပ်ညံ့ညံ့ရယ်။ ဒါဖြင့် ဘာစာရေးနည်း တော်သလဲဆိုရင်တော့ ဟုတ်ကဲ့ အားလုံး ခပ်ညံ့ညံ့ပါဘဲ။းD
အဲဒီလို လင်းပက်ကလဲ သူကြီးမင်းတို့ဘက်မှာ အိမ်တိုင်း ၀ယ်မထားနိုင်ကြဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ငါးရှာ ထွက်တော့မယ်ဆိုရင် နင်တို့အိမ်က လင်းဘက် ယူခဲ့နော်။ ငါတို့ဆီမှာ လင်းပက် မရှိဘူး စသဖြင့် ညှိနှိုင်းပြီး ငါးရှာထွက်ကြတာပါ။
ချောင်းထဲ မြောင်းထဲ ရောက်တော့ တစ်ယောက် တစ်ဖက်စီ လင်းပက်ကိုင်ပြီး ငန်းစဉ်ထိုး ပိုက်စိပ်တိုက် လင်းပက်ထိုးကြတော့တာပေါ့။ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ရေက နက်တယ်လေ။ ခါးလောက် ရင်လောက်ထိ ရှိတယ်။ ရေနက်ပေမဲ့ ငါးတွေ ရှိတဲ့အတွက် ရေထဲဆင်းပြီး လင်းပက်ထိုးကြတာပါဘဲ။ အဲဒီလိုမျိုး အခါကျတော့ ရေနက်ပိုင်းကို တစ်ယောက် ကမ်းစပ်နားက ရေတိမ်ပိုင်းနားတစ်ယောက် လင်းပက်ကို ကိုင်ပြီး ထိုးကြရတာပေါ့။
အဲဒီလိုမျိုးအခါမှာ အခု သူကြီးမင်းပြောတဲ့ "လင်းပက်လဲ စိုက်ရသေး ရေနက်ကလဲ နေရသေး" ဆိုတဲ့စကားပုံ ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။ လင်းဘက် စိုက်ထားတဲ့သူက ရေနက်ပိုင်းဆင်းပြီး လင်းပက်ထိုးရတဲ့အခါ အဲဒီစကားကို ပြောတာပါ။ ဥပမာကတော့ ငါက လင်းပက်စိုက်ထားတယ်။ ဒါကြောင့် မင်းက ရေနက်ထဲဆင်းပါ။ ငါက ရေတိမ်ပိုင်းကဘဲ နေမယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူက ရေနက်ပိုင်းဆင်းနေရတဲ့အခါ မကျေနပ်တဲ့ လေသံနဲ့ အဲဒီ စကားကို ပြောတာပါ။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ခုခုလဲ စိုက်ထားရသေး အလုပ်ကလဲ ပိုလုပ်ရသေးဆိုတဲ့ ကိစ္စတိုင်းမှာ အဲဒီ စကားပုံကို ပြောကြလေ့ရှိပါတယ်။
အခု တုံးဖလားသူကြီးမင်းလဲ ပေါက်ကျော်ကို ကော်ဖီတိုက်ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ကော်ဖီပန်းကန်လဲ ဆေးရမလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီ စကားပုံကို ပြောလိုက်တာပါ။ ဖူးးးးးးးးးးးးး မောလိုက်တာ။ ရှင်းပြတာ နားလည်ကြရဲ့လားတော့ မသိ။ ဟာ ဟ။
ဘကျောက် ပြောတာလဲ သူ့အရပ်နဲ့သူတော့ ကိုက်နေတာပါဘဲ။ အဲဒါလေးလဲ ကောင်းတယ်။ မှတ်သားစရာ တစ်ခု တိုးသွားတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူကြီးမင်းပြောတာက အဲဒီလို အဓိပ္ပါယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ပစ္စည်းလဲ စိုက်ရသေး အလုပ်လဲ ပိုလုပ်ရသေးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ပြောတာပါ။
ပုံကြိုက်သူနှင့် မိခွန်တို့က မြို့ကြီးမှာ ကြီးပြင်းလာကြတဲ့သူတွေဆိုတော့ ဘကျောက်ပြောသလို သူကြီးမင်းတို့တောဓလေ့တွေကို မျက်ခြည်ပြတ်နေကြတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ တုံးဖလားမှာ အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းတွေအကြောင်း အကုန်မသိကြလို့ :D :D :D။
ကွန်မင့်လာပေးကြတဲ့ ကိုကိုမမဦးဦးဒေါ်ဒေါ်ညီနှမအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူကြီးမင်းတို့ တုံးဖလားကိုအလည်လာခဲ့ကြဖို့လဲ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူကြီးမင်းမှာ ကူဖော်လောင်ဖက် မရှိတဲ့အတွက် ကိုယ်စားတဲ့ ပန်းကန်၊ ကိုယ်သောက်တဲ့ ပန်းကန်ကိုတော့ ကိုယ်ဆေးပေးကြပါလို့ ကြိုတင် ခွင့်ပန်ထားပါတယ်။ ဟာ ဟ။
ပို့စ်အရှည်ကြီးလဲ ရေးရ။ စကားပုံကိုလဲ ရှင်းပြရနဲ့ အဲဒီစကားပုံအတိုင်းသာ ပြောလိုက်ချင်ပါတော့တယ်။
"လင်းပက်လဲ စိုက်ရသေး ရေနက်ကလဲ နေရသေး" လို့။
Friday,4March 2011 at 15:50:00 GMT
မှတ်သားစရာတွေ့ လို့ မှတ်သားသွားပါသည်။
Log-bowl He-big တုံးဖလား သူကြီးပေါ့လေ
Friday,4March 2011 at 17:09:00 GMT
ဒီလို အဖြစ်အပျက်တွေ တကယ်ရှိတယ် ကိုကိုမောင်ရဲ့။ ပြန်ပေးဆွဲရင်းကနေ ပြန်ပေးသမားကို ပြန်ပြီး တိမ်းညွှတ်သွားတယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ကိုယ်တွေ့များလားဗျာ . . ဟဲဟဲ. . ဒီမှာသာ ဘာမှ မဟုတ်တာနော် . . . . .
Friday,4March 2011 at 18:06:00 GMT
Friday,4March 2011 at 18:12:00 GMT
ကော်ဖီများသောက်ရမလားလို့ပါ..။ ထမင်းပါကျွေးနော်။ မကြိုက်တာတွေတော့ မစားချင်ပါဘူး...သူကြီး.
Saturday,5March 2011 at 07:09:00 GMT
Tuesday, 8 March 2011 at 03:43:00 GMT
Tuesday, 8 March 2011 at 10:03:00 GMT
ဒါနဲ့ စကားမစပ် အဲဒီ သစ်တုံးနဲ့ ရေဖလားတွဲထားတဲ့ တားဖလုံးရွာက မြန်မာပြည်ရဲ့ဘယ်အနားမှာ ရှိတာလဲ။ ပထ၀ီမကျွမ်းလို့ နေရာဒေသများအကြောင်းကို နကန်း တစ်လုံးမှ မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။
Wednesday,9March 2011 at 15:50:00 GMT
ပုံပြင်ကို ဆုံးအောင်ဖတ်သွားပါတယ်။ ရှာရှာဖွေဖွေ ရေးတတ်ပါပေ့။ သီအိုရီကိုတော့ သဘောကျသွားပြီ။ ဒါဆို ကြိုက်တဲ့ အရာကို မကြိုက်တော့ ရင်ကော အစ်ကို....။း)
Sunday, 20 March 2011 at 16:20:00 GMT
ထို့ကြောင့် ထိုရွာကို တုံးဖလားဟု ခေါ်သည်
ဥယျာဉ်မှူး အဆိပ်သင့်တဲ့ နေ့